Ciidanka Qaranka Somaliland Oo Dagaal Kala Hortagay Diyaarado Ugaadhsi Sharci Daro Ah Ka Wada Badhan. |
Ciidanka Qaranka Somaliland Oo Dagaal Kala Hortagay Diyaarado Ugaadhsi Sharci Daro Ah Ka Wada Badhan.
Hargaysa(GNN)Ciidanka qaranka Somaliland ee fadhigoodu yahay gobolka Badhan,ayaa dagaal kala hor tegay diyaarado nooca qumaatiga u kaca ah oo ku soo xad gudbay hawada Somalilanad isla markaana si sharci darro ah u ugaadhsanayay Ugaadha Somaliland ee deegaanada Gobolka Badhan.
Taliyaha Ciidanka Qaranka Badhan Kabtan Yaasiin Cismaan Saalax iyo Maayarka degmada Badhan Cabdalle Maxamuud Faarax, ayaa wada jir uga hadlay duulaanka sharci darrada ah ee ay gudaha dalka Somaliland ay ku yimaadeen diyaaradahaas oo si sharci darro ah deegaannada gobolka Badhan ku soo galay isla markaana khasaare kala duwan u gaystay Xoolaha deegaanka Gobolka Badhan.
Taliye Guray iyo Maayar Cabdalle,ayaa sidaa ku sheegay waraysi ay wada jir khadka Telefoonka ugu siiyeen wargeyska DAWAN. Iyagoo ku sugan magaaladda Badhan.
“Diyaaradahani waa qaar Millatari oo ka soo duulaya meel aan fogayn gaar ahaan waxay ka soo dul kacayaan maraakiibta millatariga ee ku sugan biyaha xeebta Soomaaliya ee la dagaalama Budhcad-badeeda. waxaanay diyaaradahani ku duulayaan joog hoose, markaa saaka(shalay)ayaanu markii ugu horraysay la kulanay waxaanan kala hortagnay dagaal laakiin markii ay gaadiidka Ciidanka arkeen joog sare ayay ku kaceen dib ayaanay u noqdeen,”ayuu yidhi Taliyuhu.
Sarkaalkaas oo hadalkiisa sii watay ayaa intaa ku daray. “Annagu ciidan ahaan dagaal ayaanu kala hor tagnaa, waanan ka difaacnay intaan awoodi karaynayna waanu ka saarnay laakiin wax sidaa ku tegaya maaha waana khatar taagan. mar kastana joogta una baahan in dalka laga difaaco. waxaanan Xukuumadda dhexe ka codsanaynaa in nagala caawiyo qalab iyo gaadiidba si aanu diyaaradaha dalka uga wada saarno. Diyaaradahan waxaa wata rag Caddaan ah oo millatari ah waxaanay wataan diyaarado yar yar oo Heli kabtarro ah oo waliba ah kuwa aan daaqadaha lahayn waxaanay sitaan shabaag waawayn oo ay ugaadha ku qabanayaan oo ay khayraadka dalka ku xaalufinayaan.”
Dhinaca Kale Maayarka Degmada Badhan oo ka hadlayay khatarta diyaaradahan a ee gobolka Badhan ugaadhsiga sharci daradaha ku haya iyo khasaare ay xoolo nool u geysteen,waxaanu yidhi.
“Maanta (shalay) ayuu ugu daran yihiin duulaanka ay diyaaradahani soo qaadeen oo mabay kala joogsan, waxaanay markii dambe is heleen Ciidanka qaranka oo markii gaadiidka Ciidanka qaranku ay gaadheen goobihii ay dul duulayeen ayay dib ug noqdeen korna u fogaadeen oo joog sare ku duuleen. waxaa kale oo ay maanta(shalay) geysteen khasaare duunyeed oo xoolo ayay saaka (shalay)waabarigii dileen taasoo sababtay in geelal xeraysnaa oo ay si hoose dushooda u mareen ay dideen kuna jajabeen didistii,markaa xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa in ay gurmad deg deg ah ku soo gaadho deegaankan diyaaraduhu ugaadhiisii xaalufinayaan.”
Dhinaca kale nin geella shalay subax diyaaraduhu didiyeen lahaa oo Wargeyska Dawan la hadlay ayaa sheegay in geeliisa khasaare xoolaad uu soo gaadhay islamarkaana ay qaleen dhawr neef ka dib markii ay ku jajabeen guuxii diyaaraha jooga hoose ku duulayay ay dul mareen.